Umoya woSuntsu, uSuntsu wokuSuswa koMoya, iziQithi zoMoya -Yiconton
Amabhaso kunye neSatifikethi
Ikhabhathi Seat Air Intwasahlobo
Uthintelo lokumiswa komoya
ICompressor yokuNqunyanyiswa komoya
Umyili wezinto zokuMisa zoMoya
I-Yitao yinkampani ekhethekileyo ekwenziweni kwemisebenzi yokunikezela ngeenkonzo zomoya nokumiswa komoya.
UKUZIPHATHA KWEMOYA YABO YOBUCHULE UBOMI OBONELAYO
Phumelela ukuthintela kunye nokulawula ubhubhane we-COVID-19
Fe / 28/2020
Nge-2 kaFebruwari, eGuangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd kunye nenkampani eyi-Guangdong Yiconton Airspring Co, ephethwe yiyo yonke. umntu ngamnye wanikela nge-CNY 100,000 yokuxhasa umlo ngokuchasene ne-coronavirus yenoveli. Ngexa inikezela ngenkuthalo imali, inkampani ikwazama ukwenza iinzame zokuthintela ...
Iindaba ezimnandi! Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. sifumene ngempumelelo isiqinisekiso seZiko lobuChwepheshe laseGuangdong ngo-2019
Kutshanje, iSebe lezeNzululwazi neTekhnoloji lePhondo laseGuangdong libhengeze uluhlu lweZiko lobuGcisa neTekhnoloji yeGuangdong ngonyaka ka-2019. IGuangdong Yiconton Airspring Co, Ltd. ngumnini wazo zonke i-Guangzhou Yitao Qianchao Vibration yoLawulo lweTekhnoloji ye-Vibration, ...
Umongameli we-Yitao uPang Xuedong uthi inkampani inika ingqalelo enkulu kwi-COVID-19.
Fe / 25/2020
Kutshanje, ukuze kuliwe i-COVID-19, iGuangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd. ibhengeze i-Guangdong Yiconton Airspring Co yayo yonke inkampani. Uya kufaka enye i-100,000 ye-yuan, ngelixa le nkampani ezimbini inikezele nge-100,000 ye-yuan nganye ngaphambi kwe-Sao Yitao sele inikezele ngama-300 ...
Novemba / 28/2019
I-Guangdong Yiconton Airspring Co, Ltd., (Ekuthiwa yi "Inkampani") yinkampani ephetheyo ye-Guangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, Ltd., ephumelele imbasa yamashishini aphezulu kwimveliso kwiqela lokukhula kwamashishini. Kwi-8th China Innovation nakwi-Entre ...
Ngokubhiyozela ngokufudumeleyo inkampani yethu "yomelele" uphawu lukalwe njengohlobo lwaseGuangdong oludumileyo kwiimveliso zentwasahlobo yemoto.
NgoFeb / 04/2019
Ngokweemfuno ezisemgangathweni ze "Guidance yePhondo leGuanggong Brand Brand Products", "ubungakanani" beemveliso ezizezinye zeGuangzhou Yitao Qianchao Vibration Control Technology Co, uhlobo lweshishini, banikwa "iimveliso zorhwebo zePhondo laseGuangdong" nguGuan ...